Makomo eAndes muVenezuela | Absolut Kufamba
Imwe yemakomo akanaka kwazvo uye akapamhamha epasi rose ndeye Andes makomo. Inoyambuka nyika dzinoverengeka muSouth America uye inofamba yakazara 8500 kilomitas yerunako rwakachena ...
Chikamu chegomo iri chinoyambuka Venezuela, ndiyo inonzi yekuNorth Andes: inoshamisa renji yemakomo anodarikawo neColombia neEcuador. Asi nhasi tichazotarisa pane iyo Andes Makomo eVenezuela.
1 Makomo eAndes
2 Tourism muAndes yeVenezuela
Uyu ndiyo yakareba makomo emakondinendi pasi rose uye inogona kukamurwa kuita zvikamu zvitatu, iyo Maodzanyemba andes, the Andes centrales uye iyo Maodzanyemba Andes.
MaAndes ekuchamhembe, iwo anotidaidza nhasi, ari pasi pemakiromita zana nemakumi mashanu paupamhi uye akaenzana kureba kwemamita 150 2500. Iyo Andes iri pakati ndiyo yakafararira uye yepamusoro.
Maodzanyemba Andes, anonziwo maodzanyemba Andes, Iwo anotangira kubva kuBarquisimet-Carora kushushikana, muVenezuela, kusvika kuBombon Plateau, muPeru. Maguta eVenzuelan akadai seMerida, Trujillo kana Barquisimeto, ari pamakomo akakosha aya.
Iko kunopfuura makomo aya, nzvimbo yeVenezuela inowana humwe hunhu hwehukama. Kune ivhu rakatsetseka pamwero wegungwa asi kune zvekare makomo marefu, ndosaka kune mavara mazhinji uye mafomu epasi izvo zvinoshamisa.
Makomo eAndes muVenezuela ane zvinhu zvikuru zvitatu: iyo Sierra de La Koulata, Sierra Nevada uye Sierra de Santo Domingo. Vanosvika pakakwirira kusvika pamamita zviuru zvishanu. Semuenzaniso, iyo yepamusoro soro munyika iri pano, iine 5 metres, iyo Bolivar Peak. Kunyangwe paine vamwe vanoremekedzeka senge Humbold ine 4-940 metres, iyo Bompland ine 4880 metres kana Shumba nemamita ayo 4.743.
Mamiriro ekunze anotenderera pakati pemamiriro ekunze echando, yakanyanya kukwirisa, uye yakanyanya kupisa mamiriro muzasi memakomo. Mvura inonaya, semunyika yese, kubva Kubvumbi kusvika Mbudzi. Nzizi dzinoyambuka pakati pemakomo, ayo echokwadi asingafambiki nekuti ipfupi uye ine mvura zhinji. Kuyerera uku kunoyerera kupinda muhari mbiri dzehydrographic: kune rumwe rutivi, iyo iri muCaribbean, kuburikidza neLake Maracaibo, uye kune rimwe racho, Orinoco, kuburikidza neRwizi rweApure.
Izvo zvinomera zvemunzvimbo iyi zvinoenderana nemamiriro ekunze, uye mamiriro ekunze, isu atoziva kare, ane chekuita nekukwirira. Kune zvinowanzoitika zvinomera zvekupisa uye zvakanyanya kuoma mamiriro ekunze mune yekutanga 400 metres yekukwira, wobva waonekwa Miti mikuru, dzakakwirira kudarika mamirioni zviuru zvemakwenzi, kumusoro kuchine zvinomera zvePamera uye pamusoro pezviuru zvina zvemamita tatova nazvo mosses uye lichens.
Iyo Andes yeVenezuela saka inogadzira iyo yega nzvimbo iri munyika ine huwandu hwemhando dzemiti. Munzvimbo yemiti mikuru, pakati pe500 ne2 metres, iyo nzvimbo inoita kunge sango remvura saka kune misidhari, laurels, bucares, mahogany ... Yakanaka, nekuti Izvi zvinomera zvakasiyana zvinoratidzwawo mumhuka.
MuVenzuelan Andean fauna mune mabheya, condor inozivikanwa yeAndes . , nyoka, madzvinyu uye madorado nemaginabinas, pakati pemarudzi ehove.
Kuwedzeredzwa kweAndes yeVenezuela kunoita kutaura nezvematongerwo enyika vanoyambuka matunhu akati wandei enyikas: Barinas, Apure, Portuguesa, Táchira, Mérida naTrujillo. Uye sezvatakataura pamusoro apa pane akati wandei maguta akakosha seMerida, Trujillo, Boconó, San Cristóbal ...
La hupfumi hwenzvimbo iyi yaimboisa pfungwa pakukura kofi nekurima, asi mushure mekuwanikwa kweiyo petroleum zvinhu zvakachinja. Hakusi kuti zvirimwa zvakamira kugadzirwa, kutaura zvazviri kubva pano kunouya kugadzirwa kwemapatatisi, nyemba, miti yemichero, miriwo, mabhanana uye celery, nguruve, huku uye mombe kumusika weko, asi nhasi mafuta ane simba.
Tourism muAndes yeVenezuela
Kunyangwe kwenguva yakareba chikamu ichi cheVenezuela chaive kure nekushanya, isu tinogara tichirondedzera nyika neCaribbean, kwechinguva ikozvino, yanga yakavhurika kune chiitiko ichi. Kunatsiridzwa kwekutaurirana kwezvivakwa (kuvandudzwa kwemigwagwa mumakumi emakore apfuura) yanga iri injini.
Kunyangwe kusurukirwa kwakaitwa vanhu vanonzi vekumaodzanyemba kwakavachengeta vari kure nemari inosiiwa nevekushanya, neimwe nzira yakavabatsira kuve vanokosha kumusika uyu nhasi. Uye ndizvo kusurukirwa kwakavachengetedza mune yavo yese yemuno uye yekoloni kusiyana.
Avo vanogara muchikamu chino chenyika vanotsigira a chiedza kushanya, yakaderera rova, inochengetedza mararamiro avo uye nharaunda. Kushanya mumawoko evanhu pachavo kana kushanya kwatingati nharaunda.
Tinogona kutaura nezve zvimwe Yakakurudzirwa nzvimbo dzekuenda kuno muAndes yeVenezuela. Semuenzaniso, guta re Merida. Iyo yakavambwa mu1558 uye ine yakanaka ngowani yekoloni, apo takakomberedzwa nemakomo anoyevedza. Iwe unogona kuona iyo Archbishop's Palace, dzimbahwe reUniversidad de los Andes, Cathedral kana Hofisi yeHurumende.
Merida ine migwagwa yakanaka, mweya wemudzidzi, a musika wemakanzuru nhurikidzwa nhatu dzakabatikana uye dzakakurumbira, ice cream imba yekugara ine zvinopfuura mazana matanhatu zvinonaka zve ice cream, iyo Coromoto ice cream imba, ine nzvimbo yayo mu Guinness Bhuku reZvinyorwa nemapaki mazhinji nezvikwere. Imwe yemapaki anozivikanwa ndeyeLos Chorros de Milla, ine makungwa, mapopoma uye zoo.
Kune zvakare iyo Mérida waya mota iyo inokutora iwe kuenda kuPico Espejo pa4765 metres, yakaderera zvishoma kupfuura European Mont Blanc. Iyo Los Aleros Folk Park, iyo Botanical Bindu nekufamba kwayo kunonakidza pamiti ... Uye kana iwe uchida makomo iwe unayo mafambiro kuenda kuSierra Nevada nemisoro yazvo yakaisvonaka.
Rimwe guta rakakurumbira ndere San Cristóbal, guta guru renyika yeTáchira, pasi pemamita asingasviki 1000 ekukwira uye nekudaro neepamusoro yakanaka kwazvo. Inotangira muna 1561 uye iri padyo nemuganhu neColombia saka iri yepamusoro yekutengesa. Zvakare, ine makereke mazhinji ekoloni ekushanyira.
Trujillo Ndiro guta guru redunhu diki reAndean Venzuelan. Iyo yakanyanya colonial uye yakanaka senyika yese. Iyo yakavambwa mu1557 uye iri pakakwirira kwemamita 958. Inozivikanwa nemufananidzo mukuru weMhandara yeRunyararo, ine anopfuura 46 metres kumusoro uye 1200 matani ehuremu. Iine maonero akanaka uye iwo mufananidzo kubva pano unofanirwa. Guta rekare rakanaka, rine yakanaka baroque uye yerudo kereke.
Dzimwe nzvimbo dzakanaka ndiJajó, Táriba, Peribeca, Capacho ... idzi nzvimbo dzese dzine hunyanzvi hwavo uye yavo gastronomic nehotera chikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Makomo eAndes muVenezuela